Kukho uluvo lokuba amadoda othelekisayo abaziqondi kakuhle ngezilwanyana ezinconyane. Kodwa ngaba oku kunciphisa ukufana kwazo kule nto okanye kwisidalwa sezilwanyana?
Akunjalo. Ngaphezu koko, ukuhlelwa kwamadoda xa kuthelekiswa nabazalwana babo abancinci akuyona nje indlela yokufumana ilungu lekhonkco lezesondo ezinamandla ngakumbi, kodwa kunye nokuvavanya kakhulu ukujonga ukuhleka. Ubukho bokuba, ngendlela, rhoqo bangela indoda ibe yincinane njengowesilisa ofanayo nesilwanyana eshukumisayo, ukuba afane naye ngokucacileyo akanxani.
Akusiyo into yokuba izazi zengqondo zithi umntu-obabini nendoda-eyaziwa ngumgangatho okhethekileyo: abaninzi abantu bayashukunyiswa yizo mpawu kwabanye abaphanga uhlamvu lwabo. Ngako oko, sinokuphetha ngokugqibeleleyo ukuba umntu okhubekileyo ngokuthelekiswa nesilwanyana mhlawumbi kwiindawo ezinzima, okanye uzele iingcamango eziphosakeleyo malunga nesilwanyana esithile, okanye uvumelane nobuso bakhe kwiimpawu ezimbi zesilwanyana. Kwimeko nayiphi na into, oku akukwenzi kube ngaphantsi kwendawo ehlala kuyo. Ukongezelela, olu luhlu luninzi lwabafazi abaxhalabele ngakumbi ngezilwanyana kunokuba amadoda angamaqhinga, abanobunzima ekujongeni ukuncipha kwabo, nokuba baqhathanise nezilwanyana.
Ngoko ziphi na izilwanyana ezahlukahlukeneyo iintlobo zamadoda ezibukeka ngathi?
Ngokuqinisekileyo, akukho luhlu olunjalo oluza kubonelela ngokucacileyo ngokuchasene nalo mgaqo ofanayo kunye nesilwanyana esithile. Naliphi na umntu onokuba yinkani njengengonyama enhle, kwaye enomtsalane ngexesha lokudlala ngothando, njengekati elichanekileyo, kwaye lihlambalaze ngexesha lokungahambisani, njengobhere obukrakra, kunye nentembeko, njengenja. Kodwa ngenxa yobuninzi bokubuthelwa kweempawu ezithile kumntu wendoda, umntu unokumbeka kwiqela elithile lezinto ezifanayo nezilwanyana.
Ngoko, okokuqala, indoda enokuziphatha kwayo ilandelelana ngokulandelelana nemikhwa yenja. Enye yeendlela ezincinci zokuqhathanisa amadoda kwizilwanyana, nangenxa yabo abangenanto yokuzihlaziya, kunye nokuqonda ukungahambelani kwaloo mzekeliso wenqaba ukubeka ingqalelo. Amadoda afana nokuba njengezinja. Okokuqala, kuba le isilwanyana esona sininzi kuyo yonke into ekubonweni ngayo nawuphi na umntu uhambelana nokunyaniseka kunye nokukwazi ukuba ngumhlobo nesiqingatha. Ukongeza, amadoda kwiingoma ezininzi kunye nabo ngokwabo babonisa ukufanisana phakathi kwabo kunye nomhlobo omhle womntu: ngoko emehlweni abo bonke abafazi beplanethi bahlala behloniphekile, banesilumko, bathembekile kwaye, ngokwemvelo, banqweneleka.
Ngoko yintoni eyahlula inja yendoda?
Uthembekile kwaye uthembekile, uthanda ukutya okunomsoco, ukuphikelela kunye nomnini wezindlu. Ibhinqa kuye akuyena nje intombi yenhliziyo kunye nento yokumangalisa, kodwa kunye nomhlobo ongekho phantsi ethembele kwiingcamango ezinzulu. Amadoda anjalo amaninzi kwaye akulungele ukulinda intanda yabo iminyaka. Nangona kunjalo, ngokukhawuleza xa efunda ukuba umntu uyamthanda kwaye uyamthanda ngokuthembeka, yena ngokwakhe ugijimela kwiingalo zomntu ongalindelekanga: njengokuba umthetho, loo madoda awaziyo ukuba abe mhle, ngokuqhelekileyo umthandi wabo nje ngeemvakalelo eziphezulu a yaziyo. Yingakho engacingi ngethemba lobudlelwane. Ezi ntlobo zamadoda zihlala zitshata kanye kuphela ebomini babo, kwaye musa ukukhupha ngezenzo: ziyinto ebonwabileyo kumgaqo wokuba bonke abantu bayesaba iintlabathi zentsapho.
Okwesibini, ikati yindoda.
Indoda enjalo ifunyanwa ebomini phantse kuwo onke amabhinqa. Into ebalulekileyo yintando engapheliyo yesini esihle. Uyakuthanda wonke umntu kanye, kodwa unokuhlala ethembekile ngokwaneleyo kwithuba elide eliya kumnxusa, lijikizwe kwisitya esithambileyo emthonjeni wakhe. Uthando lomntu-ikati ludlulisa ngamazwi ngamaza. Yaye kungekhona ngenxa yokuba unomdla kumntu osondelene naye. Yiloo nto ayijongayo njengengona ebalulekileyo kwinxalenye. Ukuqala, ukuthandana, ukuthandana imidlalo, ukubonakalisa iimvakalelo ezithandwayo namhlanje kwizinto ezahlukeneyo - yiloo nto amadoda afana namakati. Banjalo nabo abalandeli bokucoceka. Kwaye yonke into: kwindlu kufuneka ihlanganiswe, umatshini - uhlanjwe, i-suit yabo okanye i-jeans - ihlanjwe. Yena ngokwakhe uhlambulule konke oku, ukuhlambulula nokugabisa ukuba akanamahloni. Nangona kunjalo, wayenqwenela ukuba intombi iyenze. Emva koko, indoda-cat ikhathalela ingqwalasela kumntu wayo. Ngako oko, kunzima ukuyibiza ngokuthi ayilungile. Uya kukhwela umlingani kangangoko ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa ngumthandi wakhe okanye ukwesaba ukungabi nelungelo ngokufanelekileyo emehlweni karhulumente. Hayi: kuninzi kunomsindo ngethemba lokulahlekelwa ingqwalasela.
Okwesithathu, inkunzi yindoda.
Kungakhathaliseki ukuba zinjani iintlobo zamadoda xa zithelekiswa nezilwanyana, kwaye oku akunakwenzeka ukuba umntu angakhubekisa. Ewe, ngubani ongafuni ukuba njengaleli lilwanyana elimnandi, elisebenzayo, elinamandla nelimeleyo? Ayikho isilwanyana, kodwa isimboli sobulumko, ukuqonda, amandla kunye nesantya sokuphendula. Enyanisweni kwindoda yamadoda inomtsalane phantse wonke umntu. Kodwa bahlala bengabandakanyekanga kwintetho yabasetyhini. Ngokuchanekileyo, abayinyaniso ngokwenene abakwazi ukubona ukuba zingaphi iintliziyo zinyanyiswa xa zibonakala. Ukuba ababonisi indima yabo "yase-Elvis Presley". Kwaye abayi kukholwa ngokukhawuleza. Iimpawu zikaTiger ekuziphatheni nasekuziphatheni komntu zingaphezulu kwexesha elifutshane. Ngokuqhelekileyo ziyabhubha kunye nobudala, kwaye umntu uhamba ukusuka kwiklasi yama-tigers ukuya kwelinye iqela. Kodwa kukho nabameli bezesondo eziqinileyo abangatshintshi imvelo yabo. Ukuba nolwalamano olusisigxina, abaphantse bakulungelelaniswa: kunzima ukuba bafunde ukunyaniseka ukuba enye inkosi iya kubamba izinto zabo ngaphandle kwemfuneko. Ngokuchanekileyo, umnikazi womhlaba. Kodwa abayi kuphinda balahlekelwe ukuhlala kunye ne-tiger: apha, ngobuninzi, kukho izikratshi ezinqabileyo kunye nokunyamezela konke, izipho ezivulekile kunye nokungakwazi ukuvuma isipho esilungileyo, kunye nokuxabana okuqhubekayo kubalinganiswa, kunye nokuphazamiseka kwenkanuko ngexesha lokuxolelana. Ukubeka nje, i-cocktail epheleleyo yeemvakalelo eziqaqambileyo zilindelwe ngumfazi okhethile i-tiger.
Okwesine, indlovu yesilisa.
Oqineleyo, akayithandi ukuyeka, engalindelekanga phambi kobunzima - lo ngumntu emva kwaloo nto ibhinqa libukeka emva kwodonga lwamatye. Mayelana naye, sinokuthi ngokuzithemba ukuba uyindlela ebonakalayo yokusetyenziswa kwesi sicwangciso "Ndibona injongo, andiyikubona mingcipheko." Indoda enjalo kunye nesondlo, kunye nomyeni othembekileyo, noyise onobubele onothando, kunye nomntu onyanisekileyo. Ngokuqinisekileyo, ukuba ngumfazi onothando-nkululeko, ukusebenzisana naye akuyi kuba lula: uyadalwa nje ukukhusela intanda, ukukhusela iminqweno yakhe nokumnika yonke into ngaphandle kwayo nayiphi na inzame, ngezinye izihlandlo eshiya ukwazisa kwakhe.
Indlela yokukrazula umntu osweleyo?
Ukuziphatha kunye nezenzo zomntu othandweni
Kutheni abantu bevuyela imilenze yabesifazane
Umyeni wam unomdla
Uyabona njani isini esahlukileyo
Kutheni amantombazana akhetha ucebile kwaye entle
Samos kunye neklabishi
Kuthatha ukuthini umntwana ukuba athole ubunzima obungcono emva konyaka?
Indlela yokutya ikati ekhulelweyo
Kungcono kakhulu ukubonisa ubisi lwebele
Iimpumba ezimnandi kunye nezinye iimveliso
UNatasha Koroleva uxele ngexinzelelo lwakhe
Ixabiso elinyani lothando
Ingqondo yengqondo yobuso
Imisebenzi efanelekileyo kakhulu yokulungisa isisindo
Ukudansa kweLatin America